मगलवार, फाल्गुन १३, २०७६ १२:१२:५५
कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या २४ सय नाघ्यो
मिसेस ब्युटी क्वीन शाही अब समाज सेवामा
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भारतमा
सरकारकोे निगरानी गर्दै नेकपा
बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता
प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा मनाए ६९ औं जन्मदिन
खोला दोहन रोक्न तटबन्ध निर्माण
नेपाल स्थित भारतिय राजदुत मञ्जितसिंह पुरीले नेपाल सरकारको पक्षबाट नेपाल र चिनको सिमाना हिल्सामा हेलिप्याड बनाएकोमा आफू र भारतिय सरकार निकै खुशी व्यक्त गर्नु भएको छ ।
हरेक वर्ष दश देखि बाह्र हजार भारतिय नागरिक तिर्थयात्रीका रुपमा हुम्लाको सिमकोट हुँदै चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्ने कैलास मानसरोवरमा दर्शन गर्न जान थालेपछि अघिल्लो वर्षदेखि भारत सरकारले नेपाल स्थित भारित राजदुत मार्फत निकै चासो लिन थालेको छ । हरेक वर्ष आप्mनो राजदुत मार्फत हुम्ला र चिनसँगको सिमाना हिल्सासम्मको अवस्था बुझ्ने भारत सरकारको तर्फबाट भारतिय राजदुत मञ्जितसिंह पुरीले भरखरै दुई दिने हुम्लाको भ्रमण गर्नु भएको छ । आप्mनी धर्मपत्नी सहित एक रात सिमकोटमा बिताउनु भएका राजदुत पुरी सात सदस्यीय भ्रमण दल सहित हुम्ला पुग्नु भएको हो । उहाँको भ्रमण र प्राथमिकताका बारेमा नेपालबोड संवादका लागि नेपालबोड डटकमका सम्पादक नवराज महताराले कुराकानी गर्नु भएको छ ।
नेपालबोड संवादमा भारतिय राजदुत पुरीसँगको संवादमा सम्पादक नवराज महतारा
प्रश्नः नेपालबोड संवादमा यहाँलाई स्वागत छ
राजदुत पुरीः थ्यांक यु भेरीमच
पश्नः तपाईको यो भ्रमणले हुम्लाप्रतिको कस्तो धारणा बन्यो ?
राजदुत पुरीः म हुम्मा दोस्रो पटक आउन पाएकोमा निकै खुशी छु । यो निकै सुन्दर ठाउँ हो । जसकै कारण हरेक वर्ष दश हजार भन्दा बढी भारतिय यात्रीहरु सिमकोट हुँदै कैलास मानसरोर जाने गर्छन । उनीहरुको अवस्था अवस्थाकाबारेमा जान्ने र चिन्ने अवसरका लागि म यसपटक यहाँ आएको हुँ र फेरीफेरी पनि आउने छु ।
प्रश्नः हुम्लामा आएर तपाईले गत वर्षको र यसवर्षमा के परिवर्तन देख्नु भयो ?
राजदुत पुरीः गएका वर्षभन्दा यस वर्ष दुई विषय परिवर्तन भएको पाएँ । एउटा अहिले हिल्सामा राम्रो हेलिप्याड बनेको रहेछ । जुन मेरो र मेरो देश भारतका लागि निकै महत्वपूण हो । यसले हेलिकप्टरलाई सुरक्षित अवतरण गर्न सहज भएको छ । दोस्रो सिमकोटमा नयाँ र ठूला होटेल तथा होमस्टे निर्माण भएका रहेछन् । जसलाई देखेर म निकै प्रफुल्लीत भएँ । यसले हाम्रा यात्रीको आवास खनामा समेत निकै सहज बनाएको छ । हामीलाई आशा छ । यसले हुम्ली र हुम्लाको आम्दानीमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
सिमकोट विमानस्थलमा कैलास मानसरोवरको यात्रामा आएका आप्mना देशका तिर्थयात्रीसँग भलाकुसारी गर्दै भारतिय राजदुत पुरी
प्रश्नः तपाईको यस पटकको हुम्ला भ्रमणको उद्देश्य सफल भएको मान्नु हुन्छ ?
राजदुत पुरीः यो पटक म यहाँ आएँ भने आगामी वर्षमा पनि म पटकपटक आउने छु । यहाँ आउनुको हाम्रो महत्वपूण पक्ष त यहाँको अवस्थालाई सहज बनाउनु हो । किनकी यहाँ भएर हाम्रा दश देखि बाह्र हजार यात्रुहरु मनसारेवर जान्छन् । यो वर्ष हामीले जुनको अन्तमा एउटा ठूलो समस्या भोग्नु प¥यो । केही दिन मौशमका कारण नृपालगञ्ज र सुर्खेत देखिका हवाई उडानहरु हुन सकेनन् । त्यसकारण झण्डै हजार जना यात्री केही दिन सिमकोटमै अडिनु प¥यो । आगामी वर्षहरुमा त्यस प्रकारको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भनेर म बुभ्mन आएको हुँ । मैले यहाँको अवस्था देखेर निकै खुशी छु । अवस्था सामान्य रहेछ । यहाँका होटेल, होम स्टे र अन्य आवासमा निकै सुधार भएको रहेछ । हाम्रा तिर्थ यात्रीहरु एक र दुई दिन यहाँ बस्ने सक्ने अवस्था रहेछ । त्यसकारण पनि म हुम्लाप्रति निकै खुशी छु ।
प्रश्नः तपाईको हुम्ला भ्रमणको मुख्या उद्देश्यका बारेमा हामीलाई भन्न सक्नु हुन्छ ?
राजदुत पुरीः महत्वपूर्ण त के छ भने, हरेक वर्ष दश हजार भन्दा बढी भारतिय नागरिक यही मार्ग भएर कैलास मानसरोवर यात्रामा निस्कीन्छन् । मेरो भ्रमणको महत्वपूर्ण पक्ष त हुम्ला र तिर्थ यात्रामा आएका मेरा तिनै नागरिकहरुसँगको भलाकुसारी गर्नु, मेरा नागरिकको सिमकोट बसाई, मानसरोवरसम्मको यात्रालाई सहज र आरामदायी बनाउन यहाँका नागरिक र प्रशासनिक निकायसँग सहकार्य र समन्वय एवम् सहजिकरण गर्नु नै थियो ।
दुईदिने भ्रमणमा सिमकोट पुगेका भारतिय राजदुत मञ्जित सिंहपुरी गाउँपालिका अध्यक्ष तथा अन्य स्थानीयको स्वागत ग्रहण गर्दै
प्रश्नः हुम्लाका नागरिकले भारत सरकार र तपाईको भ्रमणबाट के आशा गर्ने ?
राजदुत पुरीः हाम्रा धेरै प्रकारका समन्वय र सहकार्यका विषय छन् । एउटा पक्ष जिल्ला अस्पताल हुनसक्छ । मेरो भेटका क्रममा अस्पतालका डाक्टरले मलाई धेरै सहयोग गर्ने विषयमा कुरा राखेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा विद्युत र अक्सीजनको आपूर्तिको समस्या रहेछ । मलाई आशा छ, त्यस विषयमा हामीले साझेदारीमा काम गर्न सक्छौ । नेपालको संविधानले हामीलाई एक आपसमा सहयोग आदान प्रदानको विषयमा छुट दिएकोले पनि हामी निकै खुशी छौं । त्यस कारण पनि अस्पताल र अन्य विषयमा हामीले के गर्नु सक्छौ ? भन्ने बारेमा सोचेका छौं । हामी त अँझ झन खुशी त हुम्ला र हुम्लाका नागरिकसँगको सहकार्यमा कैलास यात्रामा आएका हाम्रा यात्रुलाई कसरी थप सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा थप छलफल भएकोमा छौं ।
प्रश्नः तपाईले इंङ्गित गरेको अस्पताल र गाउँपालिकासँग कसरी सहकार्य गर्नु हुन्छ ?
राजदुत पुरीः मैले यसअघि भनेको अस्पतालका बारेमा कसरी सहयोग प¥याउन सकिन्छ ? भनेर यहाँका अधिकारी र मेरो टिमसँग केही दिनमै सल्लाह गर्नेछु । कति र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मूल्यांकन गर्ने छौ । अनी हामी सहकार्यका लागि अघि बढ्ने छौं । अस्पतालपनि नेपाल सरकारको हो । त्यसैले हामी नेपालसरकारसँगको समेत समन्वयमा काम गर्ने निर्णयमा पुग्ने छौं । यसरी नै सिमकोट विमानस्थल, गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने बारेमा छलफल गर्ने छौं । हिजैमात्रै हामीले गाउँपालिकाका प्रमूखसँग लामो छलफल गरेको छु । सहयोगका धेरै विषयमा कुरा भएको छ । मलाई लाग्छ सिमकोट, कैलास यात्रीका लागि निकै खुला र सहज स्थान हो ।
पश्नः तपाई (भारत) सँग अर्को वर्षकालागि केही नयाँ योजना छ ?
राजदुत पुरीः विषेश योजना त दर्शनार्थीहरुको अवस्थामा सामान्यीकरण गर्नु नै हो । सिमकोटमा कथमकदाचित मौशम प्रतिकुल भएर वा कुनै कारण सिमकोटमै बस्नु पर्ने भएपछिको अवस्थामा दर्शनार्थीहरु एक वा दुई दिनका लागि सानो व्यस्तता सहितको पूर्व तयारीका साथ रहनु पर्ने देखिन्छ । मेरो देशका तिर्थालुहरु यहाँको हावापानीसँग अनुकुलित हुनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।किनभने सिमकोट दश हजार फिट बढीको उचाईमा छ ।
दुईदिने भ्रमणमा सिमकोट पुगेका भारतिय राजदुत मञ्जित सिंहपुरी स्थानीयको स्वागत ग्रहण गर्दै सिमकोट विमानस्थलमा
प्रश्नः तपाईसँग भारतिय धार्मिक यात्री र नेपाली व्यवस्थापनतर्फको कुनै विषेश चासो छ ?
राजदुत पुरीः मसँग कुनै त्यस्तो विषेश प्रकारको चासो छैन् । तर १० देखि १२ हजार यात्री यही रुड भएर हरेक वर्ष कैलास मानसरोवर जान्छन् । यो कैलास जाने र आउने निकै छिटो र छरितो मार्गपनि हो । हाम्रो बिनम्र अनुरोध के छ भने, कुनै कारण यात्रीहरुलाई प्राकृत र व्यावहारिक कारणले केही समस्या आएमा स्थमनीय तबरबाट उहाँहरुलाई सहयोग गर्न अनुरोध छ । अनि हाम्रो यसैमा लामो सहकार्य र सम्बन्ध नै रहन्छ भन्ने लाग्छ ।
प्रश्नः गत वर्षभन्दा यस वर्ष भारतिय नागरिक घट्नुमा कुनै विषेश कारण देख्नु हुन्छ की ?
राजदुत पुरीः म सँग त्यस्तो कुनै कारण छैन् । मलाई लाग्छ हरेक वर्ष भारतिय तिर्थयात्रीहरुको चाप उत्तिकै छ । आशा छ, आगामी दिनमा त्यो संख्या झन बढ्दै जाने छ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, भदौ ३१, २०७५, ०७:०९:००
‘नेपाल–भारत सम्बन्ध यथास्थितिमा रहँदैन’ नेपालबोट संवाद
कर्णालीमा ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६ 34
कट्टी गाउँका दलितको मर्म बुझ नवराज महतारा
कर्णालीमा हराउँदै हुड्के नाच शनिवार, माघ १८, २०७६
हुम्लाको संस्कृति झल्काउन ‘रातो टालो’ बिहिवार, माघ १६, २०७६